Xeer-ilaaliyaha Qaranka Oo Dacwad Musuq kusoo Oogay 20 Masuul. – Awdalmedia
Xeer-ilaaliyaha Qaranka Oo Dacwad Musuq kusoo Oogay 20 Masuul.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa ka hadlay sababta ay ay ku xiran yihiin masuuliyiin loo soo xiray falal Musuq-maasuq la xiriira iyadoo aan maxkamadi xukun ku ridin.
Masuuliyiinta Xiran oo 20 ka badan ayaa waxaa ka mid ahaa agaasmihii guud ee Wasaarada Caafimaadka Somalia iyo agaasimaha waaxda Maamulka Maaliyada ee wasaaradaas.
Labada masuul ayaa loo xiray dhowaan markii looga shakiyey iney isdaba mariyeen lacago dowladu ugu talo gashay ka hortaga cudurka Coronavirus, waxaana eedeymaha loo heysto uu lugaha la galay wasaarado iyo heyaddo kale oo dowlada ka tirsan sida uu sheegay Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud
“Xafiiska Xeer Ilaalinta guud ee qaranka waxa ka go’an la dagaalanka musuqa iyo ku tagri falka hantida qaranka. iyadoo laga duulaayo Masuuliyaddaas Qaran” ayuu yiri xeer ilaaliyaha Qaranka” ayuu yiri xeer ilaaliyaha oo la hadlay Warbaahinta
Waxaa uu sheegay Xeer ilaaliyuhu in masuliyiinta xiran loo heysto musuq-maasuq socday muddo saddex sano ka badan oo soo shaac baxay.
“Baaritaanku waanoo soo gebageboobay, cadeymihiina waa soo dhameystirnay, waxaan sugaynaa in heydaha garsoorka ay mudeeyaan xiliga uu bilaabanayo dhegeysiga dacwada” ayuu yiri Xeer ilaaliyaha.
Waxaa uu nasiib daro ku tilmaamay in dad qaarkood ay isku dayayaan iney marin habaabiyaan kiiskan si ay u daboolaan dembiga musuqa ah ee la galay, waxaan idin sheegayaa xafiiska xeer ilaalinta iyo garsaoorkuba kama shaqeeyaan siyaasad, shuqulna kuma laha, waaba labo heyadood oo madax banaan” ayuu intaas ku soo daray xeer ilaaliyaha.
Madaxweyne Deni Oo Magacaabay Madaxda Maxkamadaha Ciidamada Puntland.